Qiso: Dareenka Dadka Ee Kala Duwan Xaqdhowr! | Dhaymoole News
Qiso: Dareenka Dadka Ee Kala Duwan Xaqdhowr!
September 17, 2018 - Written by wariye999
Saqdii dhexe markii ay gabadhu ka soo baraarugtay hurdada ayaa arki weyday ninkeedi, ka dibna way kacday oo guriga qolalka kale ka baadhay , markii danbe waxay heshay isagoo madbakha fadhiya oo koob shaah cabaya indhihiisana ilmo ka qubanayso, laakiin si weyn u fikirya oo aan uba jeedin iyada.
Way usoo dhowaatay iyadoo aad uga werweraysa dhibaatada la soo gudboonatay ninkeeda. Waxayna ku tidhi “ Maxaa ku helay, ee aad xiligan saq badhka ah keligaa halkan la fadhidaa, oo aad u ilmaynaysaa?”
Waxaana uu ugu jawabaay “ maanta guurkeenii waxa ka soo wareegay 15 sano, mala socotaa “? Waxay tidhi haa waan ogahay. Waxa uu haddana ku yidhi “ ma xusuusan tahay markii aniga aabaha aanu kaynta joognay ee aan ula soo baxay Midida sida ciyaarta ah? Waxay tidhi “ haa”
“ Ma xusuuna tahay in aabaha igu yidhi haddii aanad gabadhayda guursan waan ku ashktayanaya oo waxa lagu xidhi 15 sano? Haa.. wuxu yidhi “ haddaba caawa saacaddani waa habeenkii uu iga dhamaan lahaa xabsiga 15 sano haddii la ixidhi lahaa, waxaana aan xusuutay noloshaasi xun. Waa wanaagsan inaad ilaaliso dareenka qofka oo erayada xun aan weligood ilaabin iyagoo ka ilamaynaya kelmado qudha.